GlassFish - chii chaizvo ichi kuitwa? | Linux Vakapindwa muropa
GlassFish iri yemahara yakavhurwa sosi software application server (pasi peCDDL * uye GNU GPL marezinesi), uye yemahara yakagadziriswa neSun Microsystems (yava kunzi Oracle). Inoita matekinoroji akatsanangurwa mupuratifomu yeJava EE yekambani iyi, uye inobvumira inomhanya maapplication anotsigira uku kutsanangurwa.
Kune a Shanduro yekutengesa GlassFish inonzi Oracle GlassFish Enterprise Server. Pamusoro pezvo, Oracle yakapa iyo TopLink yekutsungirira module. Kune rimwe divi, chikuva ichi chakavakirwa paZuva Java Sisitimu Yekushandisa Server, chinobva kune inozivikanwa Apache Tomcat ine zvimwe zvinoriumba senge Grizzly, iyo inoshandisa Java NIO kupa scalability uye kuita zviri nani.
* Rezinesi reCDDL rakatsiviwa neEclipse Public License (EPL). Kana iwe uchinetseka nezve mutsauko uripo pane yemahara neyekutengesa vhezheni, yechipiri inotsigirwa mukutsinhana nemutengo wakabhadharwa rezinesi. Muchiitiko ichocho, inotungamirwa zvakanyanya kumakambani, mayunivhesiti, uye mamwe marudzi emasangano anochida.
Iyo GlassFish server inotsigira teknolojia seJSP, JSF, Serverlets, EJBs, Java API, JAXB, JPA, RMI, nezvimwe. Izvi zvinobvumira vanogadzira kuti vave nepuratifomu yakakura yekuvandudza zvinowoneka uye zvinotakurika maapplication. Uye zvakare, hazvisi zvakaoma kumisikidza mutoro wakasangana sumbu kuti utange kusvina chirongwa ichi munzvimbo yako yemuno kana ine kondirakiti.
Ini ndakambotaura kuti GlassFish inoshandisa chikuva Java EE (Enterprise Edition). Kune avo vasingazvizive, iko kusimudzira kwekusimudzirwa kwemabhizinesi Java maficha anotakurika, ndiko kuti, anogona kushandiswa pane chero server chero papuratifomu uye isina kugadziridzwa.
GlassFish parizvino iri yayo vhezheni 5.x, inova chigadziko chekupedzisira. Nekudaro, iwe une shanduro nyowani kubva kuEclipse Foundation (musimudziri wazvino).
Mamwe mashoko nezveGiraziFish - Website paGitHub
Dzidza zvakawanda nezve Eclipse GlassFish - Eclipse Foundation Yepamutemo Saiti
GlassFish kodhi kodhi - GitHub
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » GlassFish - chii chaizvo ichi kuitwa?